Yuusuf Daba-Geed: Siyaasi aan laga maarmin haddana loo maara la’yahay | Saxil News Network
Yuusuf Daba-Geed: Siyaasi aan laga maarmin haddana loo maara la’yahay
Maamulka Hirshabeele ayaa u maara la’ muranka ka dhshay xil ka qaadista gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan, Yuusuf Axmed Hagar (Daba-Geed) oo ku gacan seyray go’aankii xilka looga qaaday.
Image captionYuusuf-Dabageed ayaa ku gacan seyray xil ka qaadista Madaxweyne Waare
“Reer Hiiraan asal ahaan ba ma ogola Maamulka Hirshabeele, waxayna qabaan falaaganimo siyaasadeed, Gudoomiye Dabageed na waa nin taageero degaan ku leh Gobolka Hiiraan.”sidaas waxaa BBC-da u sheegay Xassan Cali oo ka faallooda arrimaha ammaanka.
Dhanka kale madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabeele, Cali Cosoble oo markii xilkaas loo doortay xilka guddoomiyaha Hiiraan ka qaaday Yuusuf Daba-Geed ayaa BBC-da u sheegay sababta looga maarmi la’ yahay.
“Anigu markii la ii doortay xilka ayaan ka qaaday, sababtoo ah waxaan u arkay in uu yahay nin aannaan wada shaqeyn karin, markii uu Madaxweyne Waare xilkaas u magacaabay Daba-Geed na waxaa soo jeediyay Madaxweyne ku xigeenka Hirshabeele iyo odayaasha dhaqanka oo u arkay inay u fududaaneyso isku xirka labada gobol ee Hiiran iyo Shabeelaha Dhexe, marka waa talo ay soo jeediyeen dadka deegaanka”, sidaas waxaa BBC-da ku yiri Cali Cosoble.
“Shaqada Gobolka Hiiraan igu ma cusba, saddex jeer ayaa la isoo magacaabay hadda kahor, haddana waa markii afaraad oo waaya aragnimo badan ayaan u leeyahay, sababta la ii soo magcaabay na waxay tahay dadku haddii aysan wax iiga baran ama aysan wax wanaagsan iga fileyn la iima magacaabeen, dadka rabitankooda ayaan saddex jeer ku imaaday, haddii aanan waxba soo kordhinayn ma aysan oggolaadeen in markii afaraad la isoo magacaabo”, sidaas waxaa horay BBC-da ugu sheegay Yuusuf Daba-geed.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Amniga gudaha ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya, oo u warramayay warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in guddigan loo igmaday in uu ka warbixiyo, kana keeno xog waafi ah wixii halkaasi ka dhacay iyo ciddii ku Lugta lahayd, waxaana uu intaas raaciyay in dhammaan hay’adaha amniga aysan ka qeyb qaadan wax qalqal gelinaya nabad gelyada iyo in aysan gacan ka geysan wax dhibaato u keeni kara xasillooniga guud.